Ahoana no ahafahan'ny Reverse Logistics Solutions manamora ny fanodinana ny fiverenana ao amin'ny tsenan'ny E-Commerce | Martech Zone
Ahoana no ahafahan'ny Reverse Logistics Solutions manamora ny fanodinana ny fiverenana ao amin'ny tsenan'ny E-Commerce
Alatsinainy, Novambra 1, 2021 Alatsinainy, Novambra 1, 2021 Gaurav Saran
Ny areti-mifindra COVID-19 dia niova tampoka sy tanteraka ny traikefa miantsena manontolo. Mihoatra ny 12,000 nikatona tamin'ny taona 2020 ny fivarotana biriky sy fako satria nifindra niantsena an-tserasera ny mpividy noho ny fampiononana sy ny fiarovana ny tranony. Mba hanarahana ny fiovan'ny fahazarana mpanjifa, orinasa maro no nanitatra ny fisiany e-varotra na nifindra voalohany tamin'ny fivarotana an-tserasera. Raha mbola manohy ity fanovana nomerika ity ho amin'ny fomba fiantsenana vaovao ny orinasa, dia tohina amin'ny zava-misy fototra izy ireo fa rehefa mitombo ny varotra an-tserasera, dia mitombo koa ny fiverenana.
Mba haharaka ny fitakiana amin'ny fanodinana ny fiverenan'ny mpanjifa, ny mpivarotra dia tsy maintsy mampiasa lozika mivadika matanjaka sy mahomby amin'ny teknolojia mba hanamafisana ny fizotran'ny fiverenana, hanafoana ny hetsika fiverenana amin'ny hosoka, ary hahazoana tombony ambony indrindra. Ny fiezahana hivezivezy amin'ny rano manjavozavo amin'ny fanodinana ny fiverenana dia mety ho dingana sarotra izay mitaky ny fanampian'ny manam-pahaizana momba ny lozisialy avy any ivelany. Amin'ny fampiasana a Return Management System (RMS) miaraka amin'ny fahitana mihatsara kokoa sy ny mpaninjara fanaraha-maso mandroso dia afaka mitantana tsara kokoa ny fiverenana, manatsara ny fidiram-bolan'izy ireo ary manatsara ny naotin'ny mpanjifa.
Inona no atao hoe Return Management System (RMS)?
Ny sehatra RMS dia mampiasa ny fizotran'ny fanodinana fiverenana azo amboarina hitantana sy hanaraha-maso ny lafiny rehetra amin'ny dian'ny vokatra naverina, manomboka amin'ny fotoana nametrahana ny fangatahana ka hatramin'ny fotoana namerenana ny vokatra tany am-boalohany ao amin'ny lisitry ny orinasa hamidy, ary ny fiverenan'ny mpanjifa dia manana efa vita.
Ny dingana dia manomboka amin'ny fiverenana fanombohana, izay mavitrika rehefa mangataka fiverenana ny mpividy. Ny tanjon'ny vahaolana RMS dia ny hahazoana antoka fa hahafinaritra toy ny tamin'ny fividianana ny traikefan'ny mpanjifa. Ny vahaolana RMS dia natao hanampiana ireo orinasa hanatsara ny serivisy mpanjifa amin'ny alàlan'ny fampiasana fifandraisana mandeha ho azy mba hanomezana ny fanavaozana ny mpanjifa amin'ny fiverenany, izay manaisotra ny filana antso sy mailaka manaraka amin'ny ekipan'ny mpanjifa.
Raha vao tafiditra ny fangatahana, ny vahaolana dia hanome ny mpivarotra ny fahitana sy ny angon-drakitra momba ny anton'ny fiverenana mba haminavina ny fandaniana sy ny fotoana mifandraika amin'ny fiverenana ho avy ary hanara-maso izay hetsika tsy mahazatra sy mety hosoka ataon'ny mpanjifa. Misy fomba maro ahafahan'ny mpividy manao hosoka na mamerina ny fanararaotana, saingy miteraka olana lehibe ho an'ny mpivarotra izany rehetra izany - vidin'ny.
Ny fanararaotan'ny mpanjifa ny politikan'ny fiverenana dia mitaky ny orinasa hatramin'ny $ 15.9 lavitrisa isan-taona.
Ny fahitana omen'ny vahaolana RMS matanjaka mandritra ny dingana voalohany amin'ny fiverenana dia afaka mamonjy ny vidin'ny astronomia amin'ny mpivarotra an-tserasera. Rehefa alefa ny fiverenana, ny dingana manaraka dia ny hamaritana raha lafo kokoa ny vidin'ny vokatra naverina noho ny fandefasana azy any amin'ny trano fanatobian'ny orinasa. Tena ilaina izany ho an'ny orinasa e-varotra manerantany izay miatrika ny vidin'ny fandefasana avo kokoa. Amin'ny toe-javatra sasany, ny orinasa iray dia mety handefa vokatra vaovao amin'ny mpanjifa ary hilaza amin'izy ireo mba hitazona ilay taloha. Ny sehatra RMS dia manome ny angon-drakitra ilaina hanaovana ireo fanapahan-kevitra ireo.
Ny trano fanatobiana entana sasany dia tondraka amin'ny fiverenana, ka ny vahaolana RMS dia afaka mamaritra hoe aiza no toerana mety tsara indrindra mifototra amin'ny filan'ny fahatanterahan'ny fanisana azy sy ny halehiben'izy ireo amin'ny toerana misy ny mpanjifa. Rehefa voafantina ny tranokala dia afaka mandalo fanamboarana sy fisavana izay heverina fa ilaina ny vokatra alohan'ny hiverenany amin'ny lisitra.
Ny dingana farany amin'ny fizotran'ny fiverenana dia fanaraha-maso sy fanarenana ny fonosana. Milamina ny dingana amin'ny fanafoanana ny fako amin'ny fiverenan'ny vokatra, ny fanamboarana sy ny fanavaozana rehetra ilaina, ary ny fiverenana ho an'ny mpanjifa sy ny orinasa dia vita.
Ny fampidirana vahaolana RMS amin'ny farany dia hisy fiantraikany maharitra sy maharitra amin'ny orinasa e-varotra amin'ny fomba fijery ara-bola sy serivisy mpanjifa. Ny fitaovana sy ny teknolojia RMS dia afaka manampy ny orinasa hahatratra ny vokatra tadiaviny amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny tombom-barotra, ny fampihenana ny fahaverezan'ny vola miditra amin'ny fiverenana lafo, ary ny fanatsarana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa. Raha mbola manohy mandray ny e-varotra ny mpanjifa, ny fahaizan'ny RMS dia manome ny mpaninjara ny fiadanan-tsaina ilaina amin'ny fanomezana serivisy mpanjifa kalitao ary miasa miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fahombiazan'ny vidiny.
ReverseLogix no hany rafitra fitantanana fiverenana amin'ny faran'ny farany, afovoany ary mitambatra tanteraka natsangana manokana ho an'ny fikambanana antsinjarany, e-varotra, famokarana ary 3PL. Na B2B, B2C na hybrid, ny sehatra ReverseLogix dia manamora, mitantana ary mitatitra ny tsingerin'ny fiainana miverina.
Ny fikambanana miantehitra amin'ny ReverseLogix dia manome vokatra tsara mpanjifa miverina traikefa, tehirizo ny fotoanan'ny mpiasa miaraka amin'ny fizotry ny asa haingana kokoa, ary ampitomboy ny tombom-barotra miaraka amin'ny fahitana 360⁰ momba ny angona fiverenana.
Mianara bebe kokoa momba ny ReverseLogix
Tags: 3plb2b2cb2cecommercefiverenan'ny ecommerceorinasa mpamokatra entanafanarenana parcelfanaraha-maso ny entanafanaraha-maso sy fanarenana ny fonosanafiverenana antsinjaranymiverinamamerina traikefamamerina ny logistikarafitra fitantanana fiverenanamamerina ny fanodinanalozisialy mihodinareverselogixrms
Gaurav Saran dia tale jeneralin'ny ReverseLogix, ilay hany mpamatsy ny rafitra fitantanana ny fiverenana amin'ny farany, afovoany ary mitambatra tanteraka natsangana ho an'ny orinasa antsinjarany, e-varotra, famokarana ary 3PL. Talohan'ny nananganana ny ReverseLogix, Saran dia nitarika ny fivarotana orinasa ho an'ny orinasa Fortune 500 ao amin'ny Microsoft. Nitana toeran'ny mpitarika tao amin'ny fikambanana fanombohana maro izy, nanova azy ireo tamin'ny dingana voalohany ho amin'ny orinasam-pampandrosoana.
Ny endrika vaovao amin'ny E-Commerce: Ny fiantraikan'ny fianarana milina eo amin'ny indostria